“Lilo Elo Ilifa Labakhonzi BakaYehova.”​—Isaya 54:17
Bashumayela kwindawo ekukhwelelwa kuyo ikhetshi ehamba kwiintambo eKhulo
“Lilo Elo Ilifa Labakhonzi BakaYehova.”—Isa. 54:17.
EGEORGIA, abakhonzi bakaYehova baye bazibhokoxa beshumayela iindaba ezilungileyo, ibe uYehova uye wakusikelela ukusebenza kwabo nzima. Ngenxa yoko, iindaba ezilungileyo zishunyayelwe phantse kulo lonke eli lizwe.
Ngasentla: Abavakalisi bayokushumayela eUshguli, ekwiindawo eziphakamileyo
Kutshanje, abavakalisi abakhutheleyo noovulindlela baye bazama iindlela zokushumayela kwabo bahlala kwimihlaba engafane isetyenzwe. Iindawo ezisezintabeni, iilali ezisemagqagaleni nezo kunzima ukuya kuzo kuyiwa ngeeveni nangekhetshi ehamba kwiintambo.
Abavakalisi kummandla waseSvaneti
Ukususela ngo-2009, nyaka ngamnye isebe laseGeorgia belinika amabandla uludwe lwemihlaba engabelwanga bani, lize licele abavakalisi baye kuncedisa kwezo ndawo. Abaninzi baye bancama izinto ezithile ukuze bakwazi ukuya kuncedisa.
UAna noTemuri Bliadze
UTemuri noAna Bliadze babesandul’ ukutshata xa bafumanisa ukuba kufuneka abavakalisi abangakumbi kummandla osezintabeni waseAjaria. Babesandul’ ukuthenga isiza beza kwakha indlu. Kodwa bafumana ithuba lokwandisa inkonzo yabo.
Baqala bahlala iveki eAjaria. Ekhumbula xa babesandul’ ukufika, uTemuri uthi: “Abavakalisi balapho babehamba imigama emide ukuze bayokufika kwezi lali zincinane. Sasineveni, ngoko nangoko ndaqonda ukuba iza kusinceda kakhulu.”
Yena uAna uthi: “Kwakunzima kakhulu ukufuduka, ndandilithanda kakhulu ibandla esasikulo nentsapho yethu. Kodwa sayibona intsikelelo kaYehova.” UTemuri noAna bebencedisa kwiqela laseKeda elikwidolophu ekummandla waseAjaria kangangeminyaka emithathu.
Oovulindlela abakhethekileyo bokwexeshana baba luncedo kakhulu xa kwakushunyayelwa kumhlaba osemagqagaleni. Xa bagqiba isabelo sabo, oovulindlela abaninzi bagqiba kwelokuba bangahambi, ukuze baqhubeke befundela izifundo zabo.
Oodade ababini abangoovulindlela, phofu bobabini banegama elifanayo elinguKhatuna, bathunyelwa kwidolophu entle yaseManglisi. Kwakungekho nelinye iNgqina elalihlala apho, kodwa aba dade babini bashumayela ngokuphumelelayo. Kwinyanga yokuqala baqhuba izifundo zeBhayibhile eziyi-9, kwelandelayo zayi-12, kwelandelayo zayi-15 zaza kwenye zayi-18! Ukuze bakwazi ukuqhubeka bezifundela, bagqiba kwelokuba basele behlala eManglisi.
Ukuze bazixhase, kwafuneka bacinge icebo. Abantu abaninzi abatyelele eManglisi bayakuthanda ukutya kwalapho okudumileyo nekuthiwa kusempilweni. Ngoko, ekuqaleni aba dade baqokelela izinto okwenziwa ngazo oku kutya baza bazithengisa kwimarike yalapho. Kodwa kwathi kusenjalo babhaqa enye indlela yokwenza imali.
Ngenye imini umntu ababemfundela iBhayibhile wabaphathela amantshontsho enkukhu. Wathi isikhukukazi sakhe siye sabeka amaqanda endaweni angayaziyo sabuya sesinamantshontsho. Eli bhinqa lafuna ukupha aba dade la mantshontsho belingawalindelanga. Kwathi kanti omnye kwaba dade unamava okukhulisa iinkukhu, ngoko bagqiba kwelokuba bathengise iinkukhu ukuze bazixhase.
Omnye wabo uthi: “Sancedwa nguYehova, abazalwana kunye nabantu esasibafundela iBhayibhile ukuze sikwazi ukuhlala iminyaka emihlanu eManglisi.” Ngoku kukho iqela eliqhubekayo labazalwana noodade.
UKhatuna Kharebashvili noKhatuna Tsulaia eManglisi
Ukushumayela Ngolunye Ulwimi
Kutshanje, eGeorgia kuye kwafika abantu abaninzi abasuka kwamanye amazwe. Oovulindlela baqonda ukuba yintsimi entsha le. Ngoko baqalisa ukufunda iilwimi ezinjengesiArabhu, isiAzerbaijani, isiNgesi, isiPersi, isiTshayina, kunye nesiTurkish.
Ngoxa oovulindlela abaninizi beye bangena kumaqela namabandla athetha olunye ulwimi, abanye baye kwiindawo ezifuna abavakalisi abangakumbi. UGiorgi noGela babesebatsha xa bafudukela kwelinye ilizwe. UGiorgi uthi: “Sasifuna ukumsebenzela kangangoko uYehova, ibe ukufudukela kwelinye ilizwe kwasivulela ithuba lokwenza kanye loo nto.”
Ecinga ngexesha awalichitha kwelo lizwe, uGela uthi: “Ukukhonza njengomdala kwintsimi efana naleya kwandifundisa izinto ezininzi. Kumnandi kakhulu ukusetyenziswa nguYehova ukunceda ‘amatakane akhe ezimvu.’”—Yoh. 21:17.
UGiorgi wongezelela athi: “Zazikhona iingxaki, kodwa zange sisithandabuze isigqibo sethu kunoko sahlala sizimisele enkonzweni yethu. Sasivakalelwa kukuba senza le nto bekufanele ukuba siyayenza.”
Omnye umzalwana onguGela naye igama lakhe, wakhonza eTurkey iminyaka embalwa. Uthi: “Ekuqaleni kwakunzima ukuthetha ulwimi lwasekuhlaleni, ibe yayingandonwabisi loo nto. Ndavuya gqitha xa ndalufundayo ndaza ndakwazi ukuncokola nabazalwana nodade kunye nabantu entsimini.”
UNino owayenguvulindlela kangangeminyaka elishumi eIstanbul, eTurkey uthi: “Kwakusuku lokuqala ndisandul’ ukufika, ndambona uYehova endixhasa. Ukushumayela kwenye indawo kukwenza ufumane amava afana nalawo aba Kwincwadi Yonyaka phantse yonke imihla.”